Nezvedu - MavhidhiyoBhurocha
MavhidhiyoBrochure (Idealway Tech Kambani) Mira muSenzhen, hupfumi uye zvematongerwo enyika uye tsika tsika, iro guta iro rakaumbwa zvakanyanya uye nekumhanyisa kumhanyisa, iyo huru China yekuparadzira nzvimbo yemagetsi, inonyanya kukosha, yekutanga nzvimbo yevhidhiyo bhurocha. Tine mukana wakasarudzika pazvinhu zvekuunganidza uye mutengo wekudzora nekudaro tinogona kupa mutengi chigadzirwa chemhando yepamusoro nemutengo wemakwikwi.
Uye sezvo shenzhen iri guta rinodhura, yepasi rose yekutengeserana nzvimbo yekuparadzira, tinogona kutumira zvinhu kumutengi nenzira dzakasiyana zvinoenderana nemutengi, hurongwa, kungave nekutaura kana nendege kana negungwa, tinogona kuendesa zvinhu kuchiteshi nekukurumidza. Kuti uwane wekutengesa, tarisa paShenzhen, kutenga vhidhiyo bhurocha, Sarudza isu!
China Wepamusoro Anotengesa & Chaiye Fekitori
MavhidhiyoBrochure (Idealway Tech Kambani) yakapihwa mari muna2009, iro gore iro bhurocha revhidhiyo rinopinda mukuzvarwa. Chigadzirwa chedu chikuru kusanganisira bhurocha revhidhiyo uye foto yedhijitari. Vhidhiyo bhurocha mamodheru anosanganisira vhidhiyo bhizinesi kadhi, uye magazini yekuisa, saizi kubva ku2ininch kusvika 10inch.
Pasinei nedhijitari pikicha, mamodheru anosanganisira bhatani bhatani dpf, yekubata bhatani dpf, Android dpf uye zvese mune imwe pc, saizi kubva 7inch kusvika 27inch. Isu tinotarisawo pane ramangwana uye kuyedza nesimba kuR & D yemagetsi chitaridzi. Chigadzirwa chikuru chekutanga uye tarisa pane ramangwana, Isu tichamira pamusika zvakanaka uye tichava neyakareba kusimudzira!
Chikwata Ndicho Chedu Simba Redu
Isu tine diki uye rine simba rekutengesa timu ine anopfuura makore manomwe emakore ekutengesa ruzivo kune yega nhengo yekutengesa. Ivo vanoziva kwazvo uye vanonzwisisa zvizere zvigadzirwa uye vanozopa vatengi nehunyanzvi hwemagetsi uye 7 * 24 mabasa ehunyanzvi. Isu hatisi chete kutengesa zvigadzirwa, asi zvinonyanya kukosha kuendesa yakanakisa yekutenga ruzivo.
Vashandi vedu vanga vachigadzira vhidhiyo bhurocha makore anopfuura mapfumbamwe uye mainjiniya edu inyanzvi yevhidhiyo bhurocha / dhijitari pikicha / chimwe chigadzirwa chemagetsi. Vimba neruzivo rwedu, vimba nehunhu hwedu uye tivimbe kugona kwedu kugadzirisa dambudziko!
Yakagadzwa muna2009, timu yedu yakashandisa makore maviri kuvhura ichi chigadzirwa chitsva uye ichiita kuti izivikanwe kumutengi uye inonakidza mutengi. Sezvo vhidhiyo bhurocha rinozivikanwa nekutambirwa nevazhinji uye vazhinji mutengi, muna 2012 kusvika 2013 makore, isu takatangisa mukutanga kunonoka kukura. ipapo tinoita kuramba tichishanda uye bhizinesi rakawana kuwedzera kukuru kusvika 2018. Iye zvino isu tiri China yepamusoro yekugadzira vhidhiyo bhurocha / vhidhiyo bhuku / vhidhiyo kurongedza ... nezvimwe uye munzira yekuenda kune ramangwana rakajeka.
1. Kunyanya mubhurocha revhidhiyo.
2. Zvakaenzana nechigadzirwa uye R&D.
3. Gutsa mutengi nezvido zvavo.
4. Bhizinesi idzva ndiro ramangwana.
Vhidhiyo bhurocha uye dhijitari pikicha furemu ndiyo yekukweva chigadzirwa chikuru. Bhizinesi nyowani uye zvimwe zvigadzirwa zvinodiwa nevatengi vedu ndiro rimwe bhizinesi redu. Chigadzirwa chedu chinonakidzwa nemusika wakanaka pasirese. Asi nekuda kwekukosha kwayo uye pfungwa yekushandisa, yedu huru bhizinesi nzvimbo inotarisa kuUS, Europe (Germany, UK, France, Italy Main), Middle-kumabvazuva (senge UAE, Saudi Arabia neQatar), AU. Nzvimbo nyowani ndiro danho redu rinotevera kupinda.
1. Ziva chiyero asi tarisa pahunhu.
2.Hold musika wepamusoro giredhi zvine simba.
3.Kuedza zvakaoma kuti upinde munzvimbo nyowani.
4. Bhadhara zvakaenzana kugadzirwa uye R&D.